Danjiraha Somalia u fadhiya Qaramada Midoobay oo ka hadlay shirka guud ee QM… – Hagaag.com
Danjiraha Somalia u fadhiya Qaramada Midoobay oo ka hadlay shirka guud ee QM…
Posted on 12 Seteembar 2018 by Admin in National // 0 Comments
Ergada Joogtada ee Soomaaliya u fadhida Qaramada Midoobey ayaa diyaar garow xooggan ugu jira Shirka 73aad ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobey oo maalmaha soo socda ka dhacaya magaalada New York ee dalka Mareykanka.
Shirka sanadlaha ee Golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobey ayaa looga hadlaa xaaladaha ka jira dunida, iyadoo Madaxda dalalka xubnaha ka ah Qaramada Midoobey ay khudbado ka jeedinayaan shirka.
Dowladda Federalka ah ee Soomaaliyeed ayaa waxaa heysta Dhibaatooyin fara badan oo loo baahan yahay in si wadajir ah ay wax uga qabtaan Qaramada Midoobey.
Danjiraha Dowladda Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobey ahna Madaxa Ergada Joogtada ah ee Fadhigoodu yahay New York Amb. Abuukar Daahir Cusmaan (Abuukar Baalle) ayaa sheegey in sanadka dowladda ay dalbatey in si buuxda looga qaado cunaqabateynta hubka sida wadajir ahna Dowladaha Caalamka ay ula shaqeeyaan Dowlada dhexe ee Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa la filayaa in markii u horeysay uu ka qeyb galo shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobey, isagoo khudbad uu uga hadlayo xaalada dalka uu ka jeedin doono shirka dhamaadka bishan September.
Madaxweyne Farmaajo ayaa inta uu ku guda jiro ka qeyb galkiisa shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobey kulamo gooni gooni ah la qaadan doona Madaxda kala duwan ee shirka ka qeyb galeysa, waxaana ilo wareedyo ku dhow dhow Madaxtooyada ay sheegayaan in Madaxweynuhu la kulmi doono ilaa 6 Boqor iyo 28 Madaxweyne oo ka kala socda dalalka dunida, isagoo kala hadli doona Iskaashi iyo isgarab istaag loo sameeyo dowladda Soomaaliya.
Danjire Abukar Daahir Cusmaan Baalle ayaa sheegey in shirka sanadkan diirada lagu saari doono xasiloonida iyo nabadgeliyada wadamada ay Dhibaatooyinka aafeeyeen, Cimilada isbedeleysa ee dunida iyo Arrimaha Caafimaadka.